Burma Partnership » Weekly Political Events Regarding the SPDC’s Election (018-2010)
Weekly Political Events Regarding the SPDC’s Election (018-2010)
By Network for Democracy and Development • May 30, 2010
The Network for Democracy and Development (NDD),aBurmese political organization based on the Thai-Burma border, is researching and distributing weekly reports summarizing political events in Burma regarding the SPDC’s Elections. These reports include information on the activities of the SPDC and USDA, opposition groups, armed ethnic groups, cease-fire groups, border guard forces, international governments and non-governmental organizations, and civilians inside Burma.
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်အခြေ စိုက်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်သော Network for Democracy and Development (NDD) သတင်းနှင့်သုတေသနဌာနမှ နအဖ၏ လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးအခြေနေ အဖြစ်အပြက်များကို အပတ်စဉ် ရှာဖွေ စုစည်း ဖြန့်ဝေလျှက် ရှိပါသည်။ ထိုအပတ်စဉ် မှတ်တမ်းတွင် နအဖနှင့် ကြံ့ဖွံ့ တို့၏ လှုပ်ရှားမှု သတင်းအချက်အလက်များ အပါအဝင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့များ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၊ လက်နက်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လဲလှယ်ထားသော အဖွဲ့များ၊ နိုင်ငံတကာ အစိုးရ နှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြန်တွင်းပြည်ပမှ ပြည်သူလူထုတို့၏ လှုပ်ရှားမှု များနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း ပြည့်စုံစွာ စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။
Download this week’s report in Burmese and in English.
Tags: 2010 Elections, Burmese, Election Laws, Ethnic Nationalities, Network for Democracy and Development, Weekly Political Events